आज मंसिर १ गतेबाट विद्युतको नयाँ महसुल दर लागु के कति छ त महशुल र? – Smartkarnalinews
आज मंसिर १ गतेबाट विद्युतको नयाँ महसुल दर लागु के कति छ त महशुल र?
बुधबार, मंसिर १, २०७८ 5:11:15 PM	मा प्रकाशित
१ मंसिर काठमाडौं ।
आज बुधबारबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर लागु गरेको छ । प्रधाकिरणले जारी गरेको महसुलमा ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताहरूलाई इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँमात्र लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर १, २०७८ 5:11:15 PM